Xildhibaanadii xujeyda oo laga hor istaagay inay usoo duulaan Muqdisho: Sabab? – Warfaafiye:
Xildhibaanadii xujeyda oo laga hor istaagay inay usoo duulaan Muqdisho: Sabab?
Ali Mohyadin Sep 12, 2017 0
Waxaa soo baxaya warar isa soo terayia, kuna saabsan tallaabadii dowladda ay ka qaadeysay sidii loo aamusin lahaa dhawaaqa ku aadan xaalada Qalbi Dhagax.
Xukuumadda waxay sameysay in ay Jubba Airways iyo milkiilaheeda Saciid Nuur Gariish ku amarto in manifestada liiska laga saaro xujeyda xildhibaanada ah ee arbacada 13-ka bishaan kusoo noqon lahaa dalka.
Waxaa heshiis wada galay ra’iisul wasaare Kheyre iyo Saciid Nuur Gariish si looga hortago xildhibaanadaasi inaysan ka qeyb qaadan fadhiyada baarlamaanka ee soo socda, si koorom loogu waayo dooda laga yeelanayo arinta Qalbi Dhagax iyo jawaabaha meel ka dhacyada ah ee xukuumadda.
Dood badan ayaa hadda taagan sidii xujeyda xildhibaanada ah aan meel looga dhicin, laakiin Kheyre ayaa ka walaacsan inay arrintaasi hirgasho.
Waxaa jira heshiisyo hoose oo Nuur Gariish ku rabo in laga dhigo wasiirka duulista iyo gaadiidka hawada, taasoo uu u maraayo wax kasta ee suuragalnimada ee mansabkaasi siyaasadeed uu ku gaarayo.
Ra’iisul wasaare Kheyre ayaa la dhacsan dadaalka uu dowladdiisa ku taageeraayo Saciid Nuur Gariish oo hadda ah xildhibaanka ka tirsan isla markaana galaangal ugu jira sidii uu u noqon lahaa wasiirka duulista hawada, si danahiisa ganacsi uu ugu ilaashada.
Xildhibaano ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka ayaa horay u diyaariyay ajande looga hadlaayo xadgudubyada ganacsi ee shirkadda Jubba ee ku aadanaa qiimaha xajka lagu tago oo xaajigiiba shirkaddu ka qaato lacag dhan $3,800.